Iintengiso ezicaphukisayo ze-MIUI ziyalungiswa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UXiaomi uqalile ukulungisa ezo ntengiso zinomsindo kwi-MIUI interface
Ukuba ungumsebenzisi we I-MIUI, ulungelelwaniso olwenziwe nguXiaomi, unokufumana iintengiso ezikruqulayo ukuba ihlala ibonisa kwiindawo ezahlukeneyo zojongano lwayo. Ewe, emva kwezikhalazo ezininzi malunga nayo, kubonakala ngathi inkampani iyayithatha le nto, kuba ithembisile ukuyilungisa.
Asilindelanga ukuba zisuswe, kuba yinto ebonakala ngathi iyinto elungileyo kwi-MIUI kuba ngumthombo omkhulu wengeniso yomenzi. Nangona kunjalo, baya kuncipha, Emva kotshintsho oluthile uXiaomi aza kulusebenzisa ngokuhlaziya.
UMlawuli weMveliso yeXiaomi kunye noMphathi Jikelele wamava e-MIUI namhlanje upapashe ileta eya kubalandeli be-MIUI e-Weibo apho inkqubela phambili esele yenziwe ukuza kuthi ga ngoku ithiwe ingxelo iyachazwa. Apho kwaxelwa ukuba UXiaomi uqalile inkqubo yokulungisa ukubekwa kwentengiso kwi-MIUI kwaye indawo enkulu yentengiso sele isusiwe. Yongezwe koku kukuba iintengiso ezininzi ziya kususwa kwiinyanga ezimbini ezizayo.
Kwaye kwakhankanywa ukuba Iqela le-MIUI ngoku lixhathisa ngamandla umxholo wentengiso ombi kwaye sele iqalile ukulungisa zonke ezo zinto sele zikumxube. Zonke iintengiso ziya kulawulwa ngokungqongqo ukusukela ngoku, kunye nezohlwayo ezinzima zokuphula umthetho. Iinyanga ezimbini ukuya kwezintathu zinikiwe ukuze kuguqulwe kwaye kwenziwe uhlaziyo.
UXiaomi uqinisekisa ezinye zeempawu ze-MIUI 11
Oku kunokuba yinxalenye yokukhangela kwabathengi iXiaomi ikhona. Kwangoko, uBai Peng, umphathi jikelele weSebe leShishini le-Xiaomi kwi-Intanethi, wayethethile kudliwanondlebe ukuba indawo yentengiso ngokubanzi yayithetha imali eninzi, ngelixa esithi inkampani iyakubonisa ukuzibamba ngokunciphisa inani leentengiso kwiROM yesiko yokuphucula amava omsebenzisi. kwaye ukhuthaze abantu abaninzi ukuba basebenzise i-MIUI.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UXiaomi uqalile ukulungisa ezo ntengiso zinomsindo kwi-MIUI interface
Imenyu yokwabelana ye-Android Q Beta 4 icwangciswe ngokwe-alfabhethi kunye neeapps eziphakanyisiweyo phezulu
Ukuqwalaselwa kumnyhadala owulungiselele i-HTC ngalo Juni 11